Contact Us - Yangon Water Bus
No.12, Nature Park Residence, Mindama Road, Mayangon Township, Yangon, Myanmar
Send us your Feedback (ဝေဖန် အကြံပြုချက်များ ပေးပို့ရန်)
 No.12, Nature Park Residence, Mindama Road, Mayangon Township, Yangon, Myanmar
 +95-9-952 553 777,9694 572 748
Disposal of Lost Property (ပျောက်ဆုံးကျန်ရစ်ခဲ့သော ပစ္စည်းများထိန်းသိမ်းခြင်း)
Any lost property of the passenger found on any of the vessels and premises, which comes into the possession of the Yangon Water Bus and not immediately claimed by the true owner thereof shall be dealt with as follows:
perishable, noxious or other offensive goods or articles shall be disposed of by the Yangon Water Bus, its agents or employees, as soon as practicable after they have come into possession, by sale or otherwise as the Yangon Water Bus sees fit;
any legally questionable items collected shall be handed over to the authority immediately;
all other goods or articles may be retained by the Yangon Water Bus foraperiod of one month after they have come into its possession, and if at the end of that period they remain unclaimed, they shall be deemed to have been abandoned by their owners and the Yangon Water Bus may dispose of them by sale or otherwise as befitting.
The Yangon Water Bus shall have no liability whatsoever to any passenger or any person in respect of lost property or damage to the luggage, and no claim for damages or compensation shall be brought by any person in respect of the same.
Yangon Water Bus ပရဝုဏ် နှင့် ရေယာဉ်များပေါ်တွင်ပျောက်ဆုံးသွားသော မည်သည့် ပစ္စည်းကိုမဆို ပိုင်ရှင် အစစ်အမှန် လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိလျင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည် ။
ပျက်စီးလွယ်သော။အနံ့အသက်နှင့် အဆိပ်တောက်ဖြစ်စေနိုင်သော ပစ္စည်းများ နှင့် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသော ကုန်စည်စလယ်များကို Yangon Water Busရှိ ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်စာလှယ်များ တွေ့ရှိခဲ့လျင် တာဝန်အရဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည် ။
တရားဥပဒေနှင့် ညိစွန်းသည်ဟု သံသယဖြစ်ဖွယ် ပစ္စည်းများကို တာဝန်ရှိ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းများထံသို့တိုက်ရိုက် အပ်နှံသွားမည်ဖြစ်သည် ။
အခြားသော ပျောက်ဆုံးသွားသည့် ကုန်စည်စလယ်များနှင့် ပစ္စည်းများကို သက်ဆိုင်သော ပိုင်ရှင် မှ တစ်လအတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူခြင်း မေးမြန်းခြင်း မရှိလျင် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်မှ စွန့်ပစ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆ၍ အဆိုပါ ပစ္စည်းကို ဖျက်ဆီး စွန့်ပစ်သွားမည်ဖြစ်သည် ။
Yangon Water Bus ပရဝုဏ် ပြင်ပတွင် ပျက်စီးပျောက်ဆုံးသော ပစ္စည်းများကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းသွားမည် မဟုတ် ။
Disposal of Lost Property
Prohibited Articles (တားမြစ်ထားသောအချက်များ)
Firearms, explosives, weapons, and other dangerous goods are prohibited on the Yangon Water Bus vessels. Any found carrying the prohibited items or breaching the Passenger Rules of Conduct will be prohibited from boarding the Yangon Water Bus vessel, removed from the jetty, and subject to relevant legal prosecution.
မီးလောင်လွယ်သော ပစ္စည်းများ၊ ပေါက်ကွဲလွယ်သော ပစ္စည်းများ အစရှိသည်တို့ကို ယူဆောင်လာခြင်းမပြုရ ။ တွေ့ရှိပါက သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်သည် ။
Passenger Rules of Conduct (ခရီးသည်များ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ)
The following Passenger Rules of Conduct shall be adhered to by all passengers to ensure the safety of the public and all employees. Any passenger in violation of these regulations may be prohibited from boarding the Yangon Water Bus vessel and removed from the facility.
No disorderly conduct or behavior that may be deemed unsafe or disruptive.
No littering - place all trash and garbage in the receptacles provided.
No spitting or creating of any other unsanitary condition
Feeding of any animal within the jetties and vessels is prohibited
Lying down on seats and benches within the jetties and vessels is prohibited
Smoking is prohibited onboard the vessels and within all enclosed spaces within the terminals. Smoking is allowed only in designated open areas within the terminal premises
Distribution or posting of any literature or advertisements in the perimeters of our facilities withoutapermission from the Yangon Water Bus is prohibited
Carrying of firearms or weapons within the terminals or on the ferries is prohibited
Commercial use of video, photography or audio recording equipment withoutapermission from the Yangon Water Bus is prohibited
Playing any audible device without the use of earphones is prohibited. Audible devices include but are not limited to radios, game devices, and audio/video playback devices
Pets and other animals are not allowed in the premises and/or on the vessels
Vandalism, graffiti, or marking of any facility or vessel is prohibited
During an emergency, all passengers shall follow the direction of the security personnel or vessel crew members
အောက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များသည် ခရီးသွားပြည်သူများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် အထူးကျပ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသောကြောင့် အဆိုပါ စည်းကမ်းများမှ တစ်စုံတစ်ခုကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ရှိသော် Yagon Water Bus ပရဝဏ် အတွင်းမှ ဖယ်ရှားခြင်းခံရမည်။ အများပြည်သူ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် အပြုအမူတစ်စုံတရာ မပြုရ။
သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာများတွင်မှအပ အမှိုက်စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ကွမ်းတတွေးထွေးခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။
ဆိပ်ကမ်းဧရိယာနှင့် ရေယာဉ်များပေါ်တွင် တိရစ္ဆာန်များ ခေါ်ဆောင်လာခြင်း၊ အစာကျွေးခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။
ခုံတန်းများပေါ်တွင် လဲလျောင်းအိပ်စက်ခြင်း မပြုရ။
ဆိပ်ကမ်းဝင်ပေါက်နှင့် ရေယာဉ်များပေါ်တွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။
ရန်ကုန်ဝါးတားဘတ်စ်၏ ခွင့်ပြုချက်မပါရှိဘဲ သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာများတွင် ကြော်ငြာခြင်း၊ ကြော်ငြာပိုစတာများကပ်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။
စီးပွားဖြစ်ကြော်ငြာများအတွက် ဗွီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးခြင်းများကို တာဝန်ရှိသူများထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ ပြုလုပ်ပါရန်။
အများပြည်သူ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် အသံကျယ်လောင်စွာ သီချင်းဖွင့်ခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။
အရေးပေါ်အခြေအနေကြုံလာပါက တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများ၏ ညွန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာပါရန်။
Pleasant Trip Tips (ခရီးစဉ်များအတွင်း လိုက်နာရန်အချက်များ)
● As more tips come up this list will be updated so please check back regularly.
● Do not stand up while the ferry is in motion.
● Do not hold your children in your arms while the ferry is docking to avoid the possibility of falling if the ferry makesahard landing.
● When it is raining, the decks of the ferries can get very slippery. Please be cautious during these conditions.
● Watch your step when passing through the doorways and when boarding or leaving the ferry.
● Please be sure to take all of your belongings with you as you leave the ferry.
● Weather and sea conditions affect vessel movement. Always use caution when boarding and departing.
● Keep an eye on your children to ensure they are not playing near doors, windows, gates, railings, or any vessel equipment.
● Pedestrian should use designated crosswalks and sidewalks outside of the jetty. Look both ways when crossing streets and parking lots.
● Drivers should look out for pedestrians and must comply with posted speed limits and all traffic regulations of Yangon.
● ယခုဖော်ပြပါ အချက်အလက်များသည် ယေဘုယျ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
● ဆိပ်ကမ်းအတက်အဆင်းနှင့် ရေယာဉ်ဆိုက်ကပ်ချိန်များတွင် အတူပါလာသည့် ကလေးငယ်များကို ဂရုစိုက်ပါရန်။
● မိုးရွာနေချိန်များတွင် ကြမ်းပြင်စိုစွတ်နိုင်သောကြောင့် ဂရုပြုပေးပါရန်။
● ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ထုတ်ပြန်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဂရုပြုပါရန်။
● မိမိနှင့်အတူပါလာသည့် ကလေးငယ်များ ဆော့ကစားနေချိန်တွင် မျက်ခြေမပြတ်ဂရုစိုက်ပါရန်။
Pets and animals are not allowed to be brought on the vessels and within the premises of the Yangon Water Bus.
Ticket Price (လက်မှတ်ဈေးနှုန်းများ)
The price ofaticket for the Route 1 (Insein ↔ Botahtaung) is 300 Kyats forasingle trip, from the point of purchase only up until the end of the Route in either direction for once.
The price ofaten-tickets bundle for the Route 1 (Insein ↔ Botahtaung) is 3,000 Kyats. Promotions and discounts are applied as specified by the Yangon Water Bus from time to time.
ခရီးစဉ်တစ်ခုလျှင် (ဥပမာ- ဗိုလ်တထောင် - အင်းစိန် ခရီးစဉ်တစ်ခုလျှင် = ၃၀၀ ကျပ်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး လက်မှတ်တစ်စောင်လျှင် ခရီးစဉ်တစ်ကြောင်းအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါမည်။
ခရီးစဉ် ၁၀ ခုစာ အထူးလက်မှတ်တစ်စောင်သည် ၃၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းကာလများတွင် ပုံမှန်ဈေးထက် သက်သာနိုင်ပါသည်။
Usage & Validity (ဆင်တူယိုးမှား ခွဲခြားနိုင်ရန်)
All tickets are to be purchased only from the Yangon Water Bus ticket counters, authorized agents, and the Yangon Water Bus online platform. All issued tickets are valid up until the specified expiration date.
Any unused ticket lost, stolen, or damaged shall not be the Yangon Water Bus’s responsibility to issueareplacement.
ရန်ကုန်ဝါးတားဘတ်စ် လက်မှတ်ကောင်တာများ၊ ခွင့်ပြုထားသည့် အေးဂျင့်များ၊ Official Facebook page များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှသာ လက်မှတ်ဝယ်ယူရန်နှင့် ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီးလက်မှတ်များ အကျုံးမဝင်ပါ။
ဝယ်ယူထားသည့် လက်မှတ်များကို သတ်မှတ်ရက်မကုန်ခင်ထိသာ အသုံးပြုပါရန်။
Each Passenger who is in possession of or has been issued withaYWB ticket or on whose behalfaticket has been issued may be accompanied by one child of not more than five years of age (height of 43 inches (ft 3’7”) free of charge, but such child shall not be entitled to occupyaseat on the vessel. If two adults wish to bring more than two children of under the height of 43 inches, tickets will need to be purchased accordingly if additional children will occupy seats; the number of tickets to be purchased shall be according to the number of seats the children will occupy.
၅နှစ်အထက် ကလေးငယ်များအတွက် လက်မှတ်ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ် ၂ဦးနှင့်အထက် ခေါ်ယူလာပါက လက်မှတ်တစ်စောင် ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Carrying personal luggage that is small enough not to disrupt the personal seating space of others on the boat is permissible for the initial stage of our operations until we announce otherwise. Larger luggage and carry-ons shall be allowed with additional charges and passes.
ခရီးသည်တစ်ဦးအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ထက် ပိုမိုသယ်ဆောင်လျှင် အခကြေးငွေပေးဆောင်ရပါမည်။
Embarking any arriving vessel is done strictly in accordance with the number of available seats. We do not guarantee that all those who have purchasedaticket would be able to embark on any arriving vessel. During rush hours, passengers should expect slight delays and waiting time in terms of embarking. Priority seats are to be offered primarily to pregnant women, elderly, and disable.
How do I buy tickets for Yangon Water Bus?
You can buy normal tickets at our jetty ticketing counters. You can also book from Facebook and Viber for special weekend trips such as Sunset trip, Kyauktan trip and Twente trip. But, still have to buyaticket at the Botahtaung jetty.
ရန်ကုန်ဝါးတားဘတ်စ် လက်မှတ်များကို ဘယ်လိုဝယ်ယူရနိုင်မလဲ?
ပုံမှန်ခရီးစဉ် လက်မှတ်များကို သတ်မှတ်ထားသော ဆိပ်ကမ်းလက်မှတ်အရောင်းဌာနများတွင် ဝယ်ယူရနိုင်ပါသည်။ အခြားသော စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက် အထူးခရီးစဉ်များအတွက်မူ Facebook Page နှင့် Viber group များမှ ဝယ်ယူရနိုင်ပါသည်။
Where are the jetties?
Our jetties are located along the river across the city. Please click here to see the map showing all of our jetties. Click Here!
ဝါးတားဘတ်စ် ဆိပ်ကမ်းများ မည်သည့်နေရာများတွင် တည်ရှိပါသလဲ? ဝါးတားဘတ်ဆိပ်ကမ်းများသည် ရန်ကုန်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် တည်ရှိပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက လင့်ခ်ကို နှိပ်၍ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Are there bus-stops near the jetties?
Yes, our jetties are all located near the bus-stops.
ဆိပ်ကမ်းအနီးတဝိုက် ကားမှတ်တိုင်များ တည်ရှိပါသလား?
What are the operation hours of Yangon Water Bus?
Our operation hours will be updated later. Please Click Here to see our vessel schedule.
မည်သည့်အချိန်ထိ ရန်ကုန်ဝါးတားဘတ်စ်ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသလဲ?
မနက် ၉ နာရီမှ ည ၈နာရီအထိ ဆက်သွယ်မေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
All Rights Reserved. © Copyright 2021 Yangon Water Bus.